Kuphi ukufumana i-backlink engcono kwiwebhusayithi yakho SEO?
Ukuba ufunda le nqaku, mhlawumbi uyazi ukuba ukwakhiwa komkhankaso wokwenza umgangatho okwaneleyo okwaneleyo ukudala umxholo omhle kunye nokulungisa iziphene ze-site, kufuneka wenze indawo yakho ibonakale kwiinjini zokukhangela ngokusebenzisa izicwangciso zokwakha izixhumanisi. Kukho ininzi yeendlela ezichaseneyo ezifanele ziqwalaselwe xa uphawula i-backlinks kwi-website yakho ye-SEO. Okokuqala, i-backlink ifanele ifike kwindawo yakho kwiindawo ezigcinwe kwilizwe elifanayo apho ufuna ukulubeka kakuhle. Ngaphezulu, i-backlink ifanele ivela kumaphepha ewebhu e-DA40-DA100 afunekayo afanelekileyo kwi-market niche kunye noshishino. Ukuba iphepha lewebhu elibhekiselele kwiziko lewebhu lichaphazelekayo kwisihloko sakho seshishini, i-backlink ephuma kweli phepha ithathwa njengeenjini zokukhangela njengoko zifanelekileyo kwaye zithembekile. Zonke i-backlinks zakho kufuneka zifakwe kumxholo ngesandla ngaphandle kweempendulo ezizenzekelayo. Kufuneka uqaphele ukuba izikhonkwane ezibekwe ngokuzenzekelayo zingabonwa lula yiGoogle kwaye zifumane izihlwayo ezinzima ngokutsha kwe-Google Panda. Kunengqiqo ukubeka i-backlink kwiiwebhsayithi ezivame ukutyelelwa ngabasebenzi be-Google kunye nabasebenzisi. Kuthetha ukuba kufuneka usebenzisane nabaphathi kwi-niche yakho yemakethi okanye omnye odibeneyo ukuze uthole i-backlinks engcono kakhulu kwiziko lakho SEO. Ngaphezu koko, kufuneka uqiniseke ukuba awuyikwakha iinqonkco kwiiwebhsayithi ze-deindexed okanye ezivinjelwe.
Ngoko, ngoku xa uqwalasele yonke into ekhankanyiweyo ngasentla, unokufumana kalula imithombo epheleleyo ejongene neenjongo zoshishino lwakho. Yonke into oyifunayo kukudala isicwangciso esicacisiweyo esekelwe kule miqathango yokukhetha. Andicebisi ukuthenga izixhumanisi ezisusela kuphela kwiwebsite Page Rank. Le Google algorithm ayiyi kuphinda iphinde ihlaziywe kwaye ingakubonisa iziphumo ezingenakwenene. Kukho izinto ezininzi zokwakha izixhobo ezifaka isandla kwizinga eliphezulu ze-injini yokusesha, ngoko ukuthenga izixhumanisi ezithembela kuphela kule methrikhi aziyi kufeza zakho iinjongo.
Ukufumana ijusi yokuxhumela esemgangathweni kunye nakwiwebhu. maphepha, kufuneka uthenge izixhumanisi ukusuka kumaphepha afanelekileyo angemuva. La maphepha anomxholo ofanayo okanye onxulumene newebhusayithi yakho kwaye unethuba elihle lokufikelela kwikarhwebo lakho ekujoliswe kuyo.
Kukho iindlela ezahlukileyo zokufumana iimpendulo ezilungileyo ze-domain yakho:
Khangela igama elingundoqo okanye i-URL
Inika iziphumo ezichanekileyo njengoko ucinga igama elingundoqo kwinqaku lamasayithi opapashi wakho. Ngaphezu koko, unokukhangela nge-URL ethile ye-domain apho ufuna ukubeka indawo yakho kwisixhumanisi. Ezi zophando zikunika ithuba lokufumana amaphepha ewebhu asebenza ngokufanelekileyo kwi shishini lakho kwaye athole iziqulatho ezivela kule mithombo.
Khangela ngegama le-domain
Olunye ithuba lokufumana i-backlink efanelekileyo kwi-SEO kukufumana Amaphepha ewebhu ukusuka kummandla ohlukeneyo wesizinda. Ungabonisa ukuba yiziphi iindawo ezisemgangathweni ozifunayo uze ufumane uluhlu lwezinto eziphambili ezifanelekileyo. I-Google iyayiqonda imimandla efana. edu,. com. , U. ukuhamba njengoko behlala bekhwalithi, bethembekile kwaye banikeze abasebenzisi ulwazi olufanelekileyo. Kuthetha ukuba i-backlink evela kule mimandla iza kukuzisa ubuninzi bexabiso. Khetha iindidi
Unokufumana i-website efanelekileyo ngokukhetha iklasi le shishini elihambelana noshishino lakho.Unokhetha iindidi ezininzi ukuba umthombo wakho wewebhu usebenza kwiintlobo ezahlukeneyo. Qinisekisa ukuba ufikelela kumawebhusayithi afanelekileyo. Ngaphandle koko, ngokungafanelekileyo ukwakha igalelo lokwakha unxibelelwano kunokunciphisa iindawo zakho zezahlulo kunye nokutshabalalisa imizamo yakho ye-SEO Source .